Samsung Galaxy Note 20 Ultra White (8GB/256GB) ~ ICT.com.mm
HomeSamsung Galaxy Note 20 Ultra White (8GB/256GB)
Samsung Galaxy Note 20 Ultra White (8GB/256GB)
Display: 6.9inches Resolution: 1440×3088 CPU: Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Chipset: Exynos 990 (7 nm+) Memory: 8GB(RAM) Internal Storage: 256GB (ROM) Rear Camera: 108MP... [Learn more]
Brand: SamsungSKU: 163621N/ASee more: Flash Sale, For You, Mobile Phones, New Arrivals, Products, Samsung, Samsung Promo, Smartphones, Today's Deals, WarehouseFilter by: Flash Sale, Promotion, Smartphones, Warehouse
Internal Storage: 256GB (ROM)
Rear Camera: 108MP (2PD) F1.8 OIS (Wide), 12MP (F3.0)(Tele), 12MP (F2.2)(Ultra Wide)
Front Camera: 10MP (2PD) F2.2
Free Gift: Samsung Galaxy Buds Live
ပရီမီယမ်ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Samsung ရဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်း Galaxy Note 20 Ultra ဖြစ်ပါတယ်။ Stainless Steel ဘေးဘောင်နဲ့အတူ ကိုယ်ထည်ရှေ့ဘက်ရော နောက်ဘက်မှာပါ Gorilla Glass Victus မှန်မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ရေစို/ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်မှု IP68 ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်ရုံတန်ရုံ ရေစိုတာမျိုးကို မှုစရာမရှိပါဘူး။ Note 20 Ultra မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ S-Pen ရဲ့ Response Time က 9ms အထိသာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ရေးနေရသလို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 6.9” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Dynamic AMOLED 2X အမိုက်စား Touchscreen အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး Resolution လို့ ပြောရမဲ့ 1440x3088 pixels (496 ppi density) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် အရောင်စိုပြည်လှပနေတဲ့ ရုပ်ထွက်မျက်နှာပြင်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Full HD နဲ့ Quad HD နှစ်မျိုးလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ အမိုက်စား Refresh Rate 120Hz ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး 60Hz သာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဂိမ်းတွေ Apps တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အလိုအလျောက် 60Hz ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ သွက်လက်မြန်ဆန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့ Exynos 990 (7 nm+) Chipset နဲ့အတူ 2.73 GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ Octa-core Processor ကို တွဲဖက်ပေးထားပြီး ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် Mali-G77 MP11 (GPU) ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Playstore ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်လို Apps/Games မျိုးကိုမဆို သွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်မဲ့ System အတွဲအဖက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Internal Storage – 256GB ပါဝင်ပြီး RAM 8GB ဖြစ်တဲ့အတွက် Apps တွေအများကြီးကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 108MP (wide) + 12MP (periscope telephoto) + 12MP (ultrawide) တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး Auto Focus ပါဝင်တဲ့ အလန်းစားကင်မရာစနစ်ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ နေ့ဘက်ရော ညဘက်မှာပါ ဘယ်လိုအနေအထားကနေရိုက်ရိုက် အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို ရရှိစေမှာပါ။ Zoom Distance ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် အဝေးပုံရိပ်တွေကို ကြည်ကြည်လင်လင် ရိုက်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ 4K နဲ့ 8K Resolution တွေအထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ 10MP (wide) Selfie ကင်မရာကို တပ်ဆင်ထားပြီး Dual Video Call ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Auto-HDR ပါဝင်ပြီး 4K ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Samsung Wireless Dex ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာလည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။ USB Type-C Fast Charging 25W နဲ့ အားသွင်းရတဲ့ 4500 mAh ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ထားပြီး 15W Fast Wireless Charging ဖြင့်လည်း အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ 4.5W Reverse Wireless Charging ပါဝင်တဲ့အတွက် Smartwatch တွေနဲ့ Earpods တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်လည်အားသွင်းပေးနိုင်မှာပါ။ အဖြူရောင်၊ ကြေးနီရောင်နဲ့ အနက်ရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Samsung DeX allows you to wirelessly link up to your TV and watchamovie or multitask with several apps via DeX while you catch up withafriend on your phone. You can even turn Galaxy Note20 and Note20 Ultra intoatouchpad or use Bixby on your phone for powerful and convenient control.
Unbox the included essentials to start your Galaxy Note20 and Note20 Ultra experience right.